The New Business "Kaadị" dị ebe a! | Martech Zone
Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 10, 2008 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Mgbe m gwa banyere ịzụta ụfọdụ kaadị azụmahịa ọhụrụ, Enwetara m ụfọdụ oké aro. Kaadị azụmaahịa ọla na ọbụna a kaadị azụmahịa site na iji Wordle.
M kpebiri na m na-aga na a kpamkpam abụghị direction si mbụ m kaadị. Mgbe ndị mmadụ nyere m kaadị azụmaahịa ha ụbọchị ndị a, anaghị m enwe ha ogologo oge - ana m erute n'ụlọ tinye ha Plaxo na LinkedIn ma mgbe ahụ, m na-atụfu ha - n'agbanyeghị otu ha si maa mma. Nke a mere ka m nwee nhọrọ ọhụrụ:
Iji nyocha ngwa ngwa, achọtara m ụlọ ọrụ na ntanetị nke na-ebipụta akwụkwọ mpempe akwụkwọ Post-It Note nke dị na kaadị azụmahịa! M nyere iwu ụyọkọ ha wee bịa ebe a n'ime izu 2. Kaadị ndị a bịara zuru oke, n'ụzọ zuru ezu na ngwaọrụ dị n'ịntanetị m jiri dezie ha. Ahọrọ m font dị mfe ọgụgụ ma m haziri ha na oku na URL saịtị m. Ana m agba ndị mmadụ ume ka ha nwee 'Circle' otu isiokwu ka ha nwee ike icheta ihe mere anyị ji zute ma ọ bụ ihe mere ị ga-eji kpọọ m!
Achọrọ m ihe pụrụ iche ma kwere na ndị a dabara na ụgwọ ahụ. Kedu ihe ị chere?
Tags: Mmatankwụnye egofoto ngwaahịa na-enweghị ezeazụmahịa azụmahịaala nke na-elekọta mmadụ ahịangwaahịa foto
Aug 10, 2008 na 12:51 PM
Nwere ike ịgwa m ebe ị si nweta ndị ahụ? Achọrọ m kaadị ọhụrụ n'onwe m ma chọọ nyocha nhọrọ a. M na-ebi Atlanta na agaghị enwe yiri kaadị, ma ihe dị ka nke a nwere ike ịbụ ezigbo mma. Obi dị m ụtọ na echiche m tụrụ aro na mbụ.
Aug 10, 2008 na 2:21 PM
Achọrọ m kaadị ọhụrụ. Nke a dị ka nnukwu echiche. Enwere m ike ịjụ saịtị saịtị nke iwu gị?
Aug 10, 2008 na 2:27 PM
Enwere m mmasị na kaadị! Enwere m otu echiche ahụ n'oge na-adịbeghị anya iji mee okirikiri n'okpuru nhọrọ. Ga-enyerịrị ọrụ ha n’ọrụ!
Aug 10, 2008 na 3:16 PM
Daalụ maka ekele, m nyere ha iwu site na iPrint.com.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ iwepụ kaadị azụmaahịa kpamkpam ị kwesịrị ịnwale http://mydropcard.com Nnukwu ngwa ọrụ ọhụụ na-ahapụ gị ka ị jiri SMS ma ọ bụ ihu weebụ mkpanaka iji zipu kaadị nke gị ndị mmadụ zutere.
Aug 11, 2008 na 7:05 PM
Hụnanya 'em. Kaadị azụmahịa bụ na "kaadị azụmaahịa". Ha kwesịrị ikwupụta ngwaahịa / ọrụ gị. Edo-edo OOhweee. Kaadị ndị a kwụpụta. Nke ahụ bụ ihe ị kpọrọ “ọrịre”
Ugbu a bụ ihe dị mma.
Echere m na ị nwere ike iji nke ahụ na kaadị azụmaahịa n'ezie ma mee ka ọ ka mma karịa iji akụkụ abụọ. N’otu akụkụ nwere isi gị (yabụ ha na-echeta ihe ị dị ka ya), nkọwa gị na akwụkwọ ịkpọ oku iji nweta ihe [ihe] na-akwụghị ụgwọ na saịtị gị, wee nwee (gburugburu) ndepụta na nke ọzọ.
Nov 7, 2008 na 1:21 AM
Doug… kedu nnukwu echiche! Na nzukọ TechCom na nso nso a, enyere m ozi kọntaktị m n'azụ ihe ọ drinkụ drinkụ ndị ahụ mgbe Starbucks na-eji ya mgbe ndị ahịa na-eweta iko nke ha. Ajụrụ m ole na ole n'ime ha ka ha dee ihe ọ drinksụ drinksụ nke m, ma jiri m mee ihe maka ịkpọtụrụ m. Enwere m ike ị ga-aga n'ụzọ gị ọzọ!
Nov 7, 2008 na 8:33 PM
Daalụ Tony! Ọ dị ezigbo ọnụ.